Canada - Canada-USA Chibvumirano Chekusimudzira Mitengo paTELUS RELAY
HOME » pasi rose Kanada - Kanada-USA Chikamu Chekusimudzira Tariffs
rakabudiswa 17/05/2019 à 20h41
Yashandura iyo 17/05/2019 à 20h45
AFP / Archives / Don MacKinnon
Canada neUnited States vakagamuchira chibvumirano chekusimudzira mitero yeCanada pamusoro pesimbi uye aluminium yakagadzirirwa neWashington, nyika mbiri dzakati musi weChishanu musangano wekubatana, kupera kwemwedzi yekutengeserana kwebhizimisi.
Donald Trump akanga zvavakatemerwa muna June mutero kuna 25% pamusoro kupinzwa hwendarira uye 10% pamusoro aruminiyamu kubva kuCanada. Canada akapindura kumunetesa mabhiriyoni 16,6 Canadian emadhora (mabhiriyoni 11) US zvigadzirwa pamusoro renegotiations pasi North American Free Trade Agreement anosarudza Washington.
Nyika mbiri idzi dzakazvipira kubvisa, mukati memazuva maviri, mitero yeCanada yeCanada steel uye aluminium kune rumwe rutivi, uye kuChina kupiwa mitero kune imwe, inoti statement.
Vachagumisawo "zvose zvinopikisana navo zvichiri kumirira paWorld Trade Organization", Canada yakaisa chikwata nesangano iri muna June 2018.
Pakupedzisira, zvakafanana matanho achatorwa kudzivisa "chairehwa simbi uye aruminiyamu subsidized kunaka uye / kana kutengeswa pa nokurasa mitengo" uye "ari transshipment kwakaita sesimbi uye aruminiyamu kugadzirwa kumwewo kupfuura Canada kana US kune imwe nyika. "
Canada ndiyo yakakura kune dzimwe nyika mutengesi wesimbi uye aluminium muUnited States.
The United States yakanga wairambidza tariffs, izvi nokuda "National kuchengeteka" zvavo, Nokumukira vavengwe nevanhu Canada vakanga panzvimbo aona mberi zvireruke ari Trump Directors kugumisa chibvumirano chitsva vakasununguka wezvokutengeserana kuchamhembe -américain.
The itsva isina kutengeswa chibvumirano pakati US, Canada uye Mexico (AEUMC) akanga akapedzisa musi September 30 pashure yedaro refu gumi mwedzi wezvokutengeserana Nhaurirano uye akasaina 30 November.
Asi zvinyorwa izvi zvichiri kumirira kugadziriswa munyika idzi nhatu, Ottawa ichiita kuti kusimudzirwa kweAmerica mutengo mamiriro sine qua non kubvumirana.
Teerera kune 21 Million, Capital podcast pane cryptocurrencies
Chibvumirano cheCanada-USA chokusimudza mitero yesimbi uye aluminium
Canada-USA chibvumirano chekusimudza mitero yesimbi ...
All kodzero kubereka uye kumiririrwa dzakachengetedzwa. © 2019 Agence France-Presse. All ruzivo (chinyorwa, mufananidzo, video, Infographics wakaiswa kana vakagarwa, inzwi kana Multimedia tigutsikane) huri muchikamu chino (kana peji ino kushanda) vanodzivirirwa ne mitemo njere pfuma kodzero. Saka, chero kubereka, nadzurudzo, kushandura, yezvokutengeserana udzvanyiriri kana shandisazve amarudzi zvose hakubvumidzwi pasina tendero yakanyorwa mvumo pamusoro AFP, kunze pachake noncommercial kushandiswa. AFP haafaniri kupiwa mhosva chero pokumbononotswa, zvikanganiso kana dzakasiyiwa hazvigoni kunze mumunda venhau mashoko kana zviito migumisiro kana kwema akaita maererano mashoko akadaro. AFP yaro Logo vari vakanyorwa trademarks
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.capital.fr/economie-politique/accord-canada-usa-pour-lever-les-tarifs-sur-lacier-et-laluminium-1338771